Amanqaku kaThibaut de Lataillade kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu Thibaut de Lataillade
Thibaut De Lataillade, GetApp GVP, uneminyaka engaphezu kwe-25 yamava ekulawuleni ishishini, ukuthengisa, kunye nokuthengisa phantsi kwebhanti yakhe. Unerekhodi eliqinisekisiweyo kwifu, ukuhamba, ukuthengiswa kwedijithali, i-CRM, ukuthengisa, ukuthengisa, kunye nezicwangciso zokukhula. U-Thibaut uye wabamba izikhundla zokuphatha kunye nezolawulo kwiinkampani ezinkulu ze-tech ezifana ne-Cegedim kunye ne-SAP.
Indlela yokuQala inokuyoyisa imingeni yeTekhnoloji yeNtengiso eqhelekileyo
NgoMvulo, Novemba 8, 2021 NgoLwesihlanu, Novemba 12, 2021 Thibaut de Lataillade
Igama elithi “ukuqalisa” liyinto entle kubantu abaninzi. Ivuselela imifanekiso yabatyali-mali abanomdla abasukela imibono yezigidi zeedola, izithuba zeeofisi ezinesitayile, kunye nokukhula okungenamkhawulo. Kodwa iingcali zetekhnoloji ziyazi eyona nyani ingathandekiyo emva kwentelekelelo yokuqalisa: ukufumana nje indawo yokuthengisa yinduli enkulu yokunyuka. Nge GetApp, sinceda abaqalisi kunye namanye amashishini bafumane isoftware abayidingayo ukuze bakhule kwaye bafikelele kwiinjongo zabo mihla le, kwaye sifunde a